Ukunyusa i-SPC Smartee, iswatchwatch ngexabiso elifanelekileyo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 09/08/2021 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Iiwotshi ze-Smart sele zenziwe zademokhrasi enkosi, phakathi kwabanye, kwiimpawu ezinje SPC ezibonelela ngemveliso yamanqanaba okufikelela kubo bonke abaphulaphuli. Kule meko sithetha ngeewotshi ezi-smart, yile nto kufuneka siyicazulule, ngakumbi ngakumbi malunga nesondlo kakhulu ukuba sithetha ngexabiso nokusebenza.
Sithetha nge-SPC's Smartee Boost, i-smartwatch yayo yamva nje ene-GPS edibeneyo kunye nokuzimela okukhulu okubonelelwa ngexabiso lezoqoqosho. Fumanisa kuthi esi sixhobo sitsha kwaye ukuba kufanelekile ngokwenene ngaphandle kwexabiso elifanelekileyo, ungaphoswa luhlalutyo olunzulu.
Njengoko kusenzeka amaxesha ngamaxesha, sigqibe kwelokuba siluhambise olu hlalutyo nevidiyo ye itshaneli yethu yeYouTube, Ngale ndlela uya kuba nakho ukujonga kungekuphela nje ukungabikho kwebhokisi kodwa kunye nayo yonke inkqubo yoqwalaselo, ke siyakumema ukuba ugcwalise olu hlalutyo unokwazi ukujonga kwaye usincede siqhubeke nokukhula.
3 Isikrini kunye neapp
4 Uqeqesho kunye nokuzimela
5 Ujongano lomsebenzisi kunye namava
Njengoko kunokulindelwa kuwotshi kolu luhlu lwamaxabiso, sifumana isixhobo esenziwe ikakhulu ngeplastiki. Zombini ibhokisi kunye nezantsi zidibanisa uhlobo lweplastiki emnyama emnyama, nangona sinokuthenga ipinki.
Ubunzima: 35 gram
Imilinganiselo: 250 x 37 x 12 mm
Umtya obandakanyiweyo ungowendalo iphela, ngenxa yoko sinokuthi sithathe indawo ngokulula, yona iluncedo olunomdla. Inobungakanani ngokubanzi be-250 x 37 x 12 mm ngoko ke ayinkulu kangako, kwaye inobunzima be-35 gram kuphela. Yiwotshi ehambelana kakuhle, nangona isikrini asihlali ngaphambili.
Sineqhosha elinye elinganisa ukuba sisithsaba kwicala lasekunene nasemva, ukongeza kubenzi boluvo, inendawo yezikhonkwane ezibotshiweyo zokutshaja. Kule meko, iwotshi ikhululekile kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Sigxile kunxibelelwano, kwaye kukuba ijikeleza kwiindawo ezimbini ezisisiseko. Eyokuqala kukuba sinayo I-Bluetooth 5.0 LE, Ke ngoko, inqanaba lokusetyenziswa kwenkqubo alinakuba nefuthe elibi kwibhetri yesixhobo ngokwaso okanye kwi-smartphone esiyisebenzisayo. Ukongeza, sinayo GPS, Ke siya kuba nakho ukulawula ukuhamba kwethu ngokuchanekileyo xa silawula iiseshoni zoqeqesho, kuvavanyo lwethu kunike iziphumo ezilungileyo. Ngendlela enye IGPS ikwasibonisa ukuba siqwalasele amacandelo athile esicelo semozulu esifakiwe.
Umlindo awunanzi manzi ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50, ngokomgaqo akufuneki ibangele ingxaki xa uqubha nayo, oku kunokuba ngenxa yokuba ayinayo imakrofoni kunye nezithethi, nangona kunjalo iyangcangcazela kwaye yenza kakuhle. Ngokucacileyo sinomlinganiso wenqanaba lentliziyo, kodwa hayi ngomlinganiso weoksijini wegazi, into exhaphakileyo.
Andiphosi nawuphi na omnye umsebenzi okoko sithathela ingqalelo ixabiso eliphantsi lale mveliso, eyilelwe uluhlu lokufikelela.
Isikrini kunye neapp
Sinefayile ye- Iphaneli encinci ye-IPS LCD, ngakumbi zi-intshi ezingama-1,3 iyonke ezishiya isakhelo esisezantsi esichaziweyo. Ngaphandle koku, ibonisa ngaphezulu kokwaneleyo kwintsebenzo yemihla ngemihla. Ngenxa yokubonelelwa kwayo kuvavanyo lwethu sikwazi ukufunda ngokulula izaziso kwaye sinezinto ezithile ezibonakalayo.
Eyokuqala kukuba yipaneli elaminethiweyo ekwanayo ne-anti-reflection coating ukuze isetyenziswe ngokulula elangeni. Ukuba sikukhapha oku kunye nokukhanya okuphezulu kunye nokuncinci ekunikezelayo, inyani kukuba ukusetyenziswa kwayo ngaphandle kukhululekile, kunee-angles ezilungileyo kwaye asilahli naluphi na ulwazi.
Inkqubo yeSmartee iyafumaneka iOS kunye Android Kukhanya, ngexesha lokulungelelanisa kufuneka senze oku kulandelayo:
Shaja isixhobo ukuqala
Singena kwaye sigcwalise iphepha lemibuzo
Sikhangela ibhakhowudi ngenombolo yesiriyeli yebhokisi
Ibhokisi yethu ye-SPC Smartee iya kuvela kwaye icofe kwikhonkco
Iya kuhambelana ngokupheleleyo
Kulo sicelo Sinokudibana nolwazi oluninzi olunxulumene nokusebenza kwethu ngokomzimba njengoku:
Ukulandela umkhondo wokulala
Ukulandela umkhondo wentliziyo
Ngaphandle kwayo yonke into, usetyenziso mhlawumbi lulula ngokugqithileyo. Isinika ulwazi oluncinci, nangona lwanele kwinto ekuthiwa inokunikwa sisixhobo.
Uqeqesho kunye nokuzimela
Isixhobo sinenombolo yeefayile ze uqeqesho lwangaphambili, ezizinto zilandelayo:
Ukuhamba ngebhayisikile ngaphakathi
Ukuqubha kwamanzi okuvula
IGPS iya kwenziwa isebenze ngokuzenzekelayo kwimisebenzi "yangaphandle". Singaziguqula iindlela ezimfutshane zoqeqesho kunxibelelwano lomlindo ngokwawo.
Ngokubhekisele kwibhetri ene-210 mAh enikezela ubuninzi beentsuku ezili-12 eziqhubekayo, Kodwa ngeeseshoni ezithile ezisebenzayo kunye ne-GPS esebenzayo, siyinciphisile yaya kwiintsuku ezili-10, engalunganga nayo.
Ujongano lomsebenzisi kunye namava
Ujongano lomsebenzisi luchanekile, ewe, sinamacandelo amane kuphela esinokuthi siwenze ngokwenza umatshini wokushicilela omde kwi «qala». Ngendlela efanayo, ekuhambeni ngasekhohlo sinokufikelela ngokuthe ngqo kwi-GPS kunye nomsebenzi wokufumana ifowuni, eya kuthi ikhuphe isandi.
Ithunyelwe nge: 9 Agasti 2021
Ngasekunene sinedatha yezempilo noqeqesho, ngokunjalo nakwidrowa yesicelo siya kuba nakho ukufikelela kwiialamu, isicelo seMozulu kunye nezinye ezingasinceda ekusebenzeni kwemihla ngemihla. Ukunyaniseka, inikezela ngemisebenzi embalwa engaphaya kwento esinokuyifumana kwisongo sokulandela umkhondo wezemidlalo, kodwa ubungakanani bescreen kunye ujongano lomsebenzisi lwenza kube lula ukuyisebenzisa yonke imihla.
Ngamafutshane, sinemveliso ethe yafana nesongo sokulandela umkhondo, kodwa inika isikrini ngokuqaqamba okuhle kunye nobungakanani obaneleyo. ukwenza lula ukusetyenziswa kwayo ngexabiso elingaphantsi kwe-euro ezingama-60 kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso. Enye indlela enomdla kakhulu kunye nexabiso elifanelekileyo xa sithetha ngewatchwatch.
Umsebenzi kunye nokukhanya okuqaqambileyo
Ine-GPS kunye nokuzilolonga okuninzi
Ukuzimela kwehla nge GPS yenziwe yasebenza
Imitha yeoksijini ayikho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukunyusa i-SPC Smartee, iswatchwatch ngexabiso elifanelekileyo